adeeg qiimo leh
Iyada oo la adeegsanayo tignoolajiyada cusub, tayo adag iyo adeeg hufan si loo taageero nolol wanaagsan
Nidaamka la socodka wiishka fog waxa uu ka kooban yahay helitaanka xogta iyo nidaamka falanqaynta goobta iyo "nidaamka maamulka fog" ee xarunta dayactirka.Waa doorashada koowaad ee nidaamka la socodka wiishka ee bulshooyin badan.
1. Kumbuyuutarka xarunta dayactirku wuxuu leeyahay shaqada kormeerka waqtiga-dhabta ah.
"Xogta ururiyaha" wuxuu qaban karaa hawlaha falanqaynta macquulka ah ee calaamadaha wiishka, digniinta tooska ah iyo digniinta qaladka.
2. Dayactirka macaamiisha iyo shaqada maaraynta macluumaadka khaladka ee xarunta dayactirka
3. Shaqada intercom fog
4. Adeegga ilaalinta VIP
5. Waxa aad KOYO ku ogeysiin kartaa qoraal ahaan marka shirar ballaadhan lagu qabanayo dhismaha, ama marka VIP-da muhiimka ahi ay booqanayaan.Waxaan horay u sii xaqiijin doonaa shaqada badbaadada leh ee wiishka, waxaanan ku meeleyn doonaa shaqaale gaar ah si ay ula socdaan wiishka goobta inta ay socoto dhacdada.
6. Adeegga kormeerka sannadlaha ah
Ogolaanshiyaha waaxyaha ay khusayso, KOYO waxay hadda samayn kartaa goobta xaqiijinta ee guddoomiyaha xawaaraha wiishka waxayna ku siin kartaa shahaado goobta, taasoo si weyn u yareeyn karta wakhtiga hoos u dhaca wiishkaaga.